Nagu saabsan - Yoolalkayaga | SABAB (Isbahaysiga ka dhanka ah waxbarashada galmada ee aan aaminka ahayn)
Isbahaysiga ka dhanka ah Waxbarashada Galmada Iskushama
SABABTA "U istaagida xuquuqda waalidiinta"
CAUSE (Isbahaysiga ka dhanka ah Waxbarshada Jinsiga ee Nabdoon) ayaa la qabtay bishii Janaayo 2018 si loo mideeyo kooxo kala duwan oo sameeyay sababo la xiriira waaliddiin fara badan oo ka jawaabaya muujinta waxyaabaha ku jira gabi ahaanba aan habooneyn ee Tacliinta Galmoodka ee Iskuxiran sida markii hore loogu yeero barnaamijka Iskuullada Nabdoon, oo laga hirgaliyo iskuulada hoos yimaada ujeedada laga leeyahay barnaamijka kahortagga xoogsheegashada. Si kastaba ha noqotee, waa barnaamij galmo aan habooneyn loogu talagalay in ardayda looga takhaluso dabeecadaha galmada ee su'aal la iska qabo. Sababo la xiriira cabashooyinka bulshada ee la soo dhaafay awgeed barnaamijkan ayaa waxaa dib loogu adeegsaday dhowr jeer waxaana lagu hirgaliyay dugsiyo dhowr magacyo kala duwan ah. Laakiin fikradaha asaasiga ah iyo yoolalku waa isku mid.
Barnaamijkan ayaa ah mid aan habooneyn in loo bandhigo ardayda dhigata dugsiga hoose ama dugsiga sare. Waxay ka kooban tahay agab iyo fikradaha galmada, oo la baray anshax la'aan, kuna dhiirigelisay ardayda inay tijaabiyaan galmada. Barnaamijka ayaa laga hirgaliyay guud ahaan maaddooyinka aasaasiga ah sidaa darteed suuragal ma aha in ardayga laga saaro waxa ku jira barnaamijkan iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan waxbarashadooda.
Ujeeddada laga leeyahay CAUSE waa in dadweynaha laga warqabo waxa ka kooban barnaamijkan si kasta oo wax ku ool ah oo ku habboon, yoolka ugu dambeeya ee hubinta in bixiyeyaasha waxbarashadu gebi ahaanba ka saaraan barnaamijkan kuna beddelaan barnaamij run ah oo ka-hortagga xoogsheegashada. CAUSE waxay ku talajirtaa inay raacdo xuquuqaha waalidka, oo barnaamij kasta oo dugsiga ku saabsan oo jinsi ahaan u muuqda waalidiinta. Sidoo kale in la hubiyo in barnaamijyada galmada oo dhan ay yihiin qaab ay waalidku ku xareeyaan xuquuq kasta, adigoon canaanan waxbarashada carruurtooda, si ay uga saaraan carruurtooda fasalada noocaas ah ikhtiyaarkooda.
Annaga CAUSE waxaan xaqiijinaynaa in dadka oo dhami ay qiimo leeyihiin.
Waxaan sidoo kale xaqiijineynaa, in sharciga Australiya gudaheeda, dadka oo dhan ay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan noloshooda sida ay rabaan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan aaminsanahay in carruurta lagu barbaariyo anshax ahaan sida ay waalidkood baray.